दश दिन पछी नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका सुर्खेतका गगन कहिल्यै नफर्किने गरी कोरियामै अस्ताए! – Korea Pati
March 31, 2021 March 31, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दश दिन पछी नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका सुर्खेतका गगन कहिल्यै नफर्किने गरी कोरियामै अस्ताए!
साथै सुर्खेत समाज दक्षिण कोरिया संस्थाका अध्यक्ष बखत थापा, संस्थाका सल्लाहकार तुलस सर लगाएतकाे टिम हॉ’स्पिटल मा पुगिसक्नु बताइएको छ। उहाँको यस दु’ख द नि’ध नमा स’मस्त नेपाली लगायत सुर्खेत समाज दक्षिण काेरिया परिवार भा’ब बि’वल भएकोछ।
गगन हामि मा’झ नभ ए पनि उनले छाो’डेर गएका उनका सहयाेगि हातलाई संस्थाले कहिल्यै नभु’ल्ने सुर्खेत समाजले बताएको छ। उ’च्च सम्मानका साथ उनको परिवार प्रति धै’ र्य धा र’ण गर्ने श’ क्ति प्र’दान हाेस, हा’र्दि क श्र दा’न्ज’ली। (सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाका निवर्तमान अध्यक्षको फेसबुक पोष्टका आधारमा तयार पारिएको समाचार)